ရေးသားသူ....... မောင်ဖားကြီး0ယောက် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်
အနုပညာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို
ငါဟာ အကုသိုလ်ကိုပဲ လိုင်းမပြောင်းဘာမပြောင်းနဲ့
ရေသန့်ဘူးစိမ်းတွေ မှာ တံဆိပ်ကပ်ထားတာ
ရေးသားသူ....... မောင်ဖားကြီး5ယောက် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်
မီးအိမ်ငယ်ကို ကိုင်စွဲကာ အမှောင်ထုထဲသို့ ကျွန်တော်တိုးဝင်လာခဲ့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြူခိုးများကျဆင်းနေကြောင်းကို မီးအိမ်ငယ်လေး၏ အလင်းဖျော့ဖျော့မှနေ၍ တွေ့နေရသည် ။ ညလေအေးကလည်း သစ်တောအုပ်များကိုဖြတ်ကာ တစိမ့်စိမ့်နှင့်တိုက်ခတ်နေသည် ။ သစ်တောအုပ်ထဲဖြတ်လျှောက်လာရင်း သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်တွင် လူရိပ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
တဖြည်းဖြည်းနှင့်နီးကပ်လာသောအခါမီးရောင်မှိန်မှိန်မှတဆင့် ထိုလူရိပ်၏ပုံသဏ္ဍန်ကို ကွဲပြားစွာမြင်လိုက်ရလေ၏ ။
လူစိမ်းသည် ကျွန်တော့်ကိုနှစ်လိုဖွယ်ပြုံးပြလေသည်။ သူ့အပြုံးသည် တည်ငြိမ်သော်လည်း ခင်မင်နွေးထွေးမူ့ရှိသည်ဟု ခံစားလိုက်ရသည်။
သူက ကျွန်တော့်ကို စမေးလိုက်သည် ။ ကျွန်တော်က သူ့အမေးကိုဖြေလိုက်သည်။
"ကျွန်တော်လား ... အလင်းကိုရှာဖွေဖို့ထွက်လာတာပါ ... ဒီမှာက သိပ်မှောင်လွန်းတယ်မဟုတ်လား ... ဒါနဲ့ ....ခင်ဗျားရော ဘာရပ်လုပ်နေတာလဲ .."
"ကျွန်တော်လဲ ... ခရီးသွားတစ်ယောက်ပါပဲ ... လောလောဆယ်တော့ ခဏနားနေတာပါ ... ဒါနဲ့ခင်ဗျားက အလင်းကိုရှာနေတာလား"
"ဟုတ်ကဲ့ ... အလင်းကိုရှာနေတာပါ... ပြောရရင်တော့ အလင်းတွေကောင်းကင်မှာ အပြည့်တောက်ပနေတဲ့ အရပ်ကိုပဲ ဆိုပါတော့ဗျာ"
"သြော် ... ခင်ဗျားက အလင်းကိုရှာနေတာကိုး ..."
သူရေရွတ်လိုက်သော အသံတွင်ကျွန်တော့်ကို ဂရုဏာသက်ခြင်း သို့မဟုတ် နားမလည်ခြင်း စသည့်အသံများပါနေသည်ဟု ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရသည် ။ တဆက်တည်းပင် သူကဆက်ပြောသည် ။
"ခင်ဗျား အလင်းကိုရှာတာကောင်းပါတယ် ... ဒါပေမယ့် ရှေ့ရောက်ရင်တော့ သတိထားဗျာ .. ခင်ဗျားသွားမယ့်လမ်းဘက်မှာက လေတွေတအားကြမ်းနေတယ်လေ ။ မိုးတွေလည်း အရမ်းရွာနေတယ် ... ခင်ဗျားမီးအိမ်လေးကိုလည်း သတိထားဦး ..."
"ဟုတ်ကဲ့ ... ကျေးဇူးပါပဲဗျာ... ကျွန်တော့်ကိုသွားခွင့်ပြုပါဦး"
မီးအိမ်ငယ်ကိုဆွဲကိုင်ကာ မှောင်မဲသောတောအုပ်ထဲသို့ ကျွန်တော်ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့သည် ။ မုန်တိုင်းများရှိနေလည်း ဖြတ်ကျော်ရပေဦးမည် ။ အလင်းကိုရှာဖွေဖို့ အတွက်ပေါ့ ..................။
+ + + + + + ။ + + + + + +
"ခင်ဗျားဟာ စကားပြောရင် ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်တအားကြည့်တာပဲ ... ခင်ဗျားဟာလိပ်ပဲဗျ"
"ဗျာ... ဘယ်လိုဖြစ်လို့ လိပ်ဖြစ်ရတာလဲ"
"ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲ ယက်တတ်လို့"
"ဟင့်အင်း ကျွန်တော်ဟာ လိပ်မဟုတ်ပါဘူး"
"သြော် ခင်ဗျားက ငြင်းချင်တယ်ပေါ့"
"မဟုတ်ဘူးဗျ ကျွန်တော်က လိပ်ထက်ဆိုးတယ်"
"ဟုတ်လား ဒါဖြင့် ခင်ဗျားက ဘာလဲ"
"ကျွန်တော်က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးတဲ့ Backhoe ကြီးလေ"
"ဟုတ်တယ်ဗျ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်ရင် လိပ်လောက်မကဘူး backhoe ကြီးလို အားရပါးရကို ယက်တာဗျ"
"သြော် ... တော်တော်ဆိုးတာပဲနော်"
"ဒါပေမယ့်ဗျာ ... တစ်ခါတော့လိပ်လေးတစ်ကောင်နဲ့ ပြိုင်ယက်တာ ကျွန်တော်ရှုံးသွားဖူးတယ်ဗျ"
"ဒီလိုလေဗျာ သူကကျွန်တော့်ရှေ့က နေလာယက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်လည်းသူ့လောက်တော့အေးဆေးပေါ့ဆိုပြီး ပြန်ယက်မယ်လုပ်လိုက်တာ... အား ......လား .......လား ကျွန်တော်က စက်ပဲဗျ ... ဆီလည်းမရှိ...မောင်းတဲ့သူလည်း မရှိရော ကျွန်တော်ခံလိုက်ရတော့တာပေါ့"
"သြော် ... ခင်ဗျားလို Backhoe ကြီးလည်း ခံလိုက်ရသေးတယ်နော်"
နေသာသော တစ်နေ့တွင် တောအုပ်ထဲသို့ ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ထွက်လာသည်။ တောအုပ်အလယ်တွင် ထိုင်ကာငိုင်နေသော ကျားတစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်ရသောကြောင့် ကျွန်တော်သူ့အနားသို့ချည်းကပ်သွားသည် ။ ကျွန်တော်က ကျားကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်။
"ခင်ဗျား ... ဘာဖြစ်လို့ငိုင်နေရတာလဲဗျ ..."
"ရွှေယုန်ဗျာ ကျွန်တော့်အပေါ်လူလည် အဲ ယုန်လည် ကျလွန်းလို့ပါ"
"ခင်ဗျားဗျာ ဒီပုံပြင်ထဲမှာပဲ နုံအအနဲ့ ခံလိုက်ရတာပါ ... တခြားပုံပြင်တွေမှာတော့ ခင်ဗျားတို့ဟာ ငစဉ်းလဲကြီးတွေဆိုပဲဗျ"
"ဟုတ်ပါတယ်လေ ... ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီပုံပြင်တွေကိုလည်း ခင်ဗျားသေသေချာချာ လေ့လာကြည့်ပါဗျာ .. ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ပဲ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲပါစေဦး နောက်ဆုံးတော့ ယုန်ပညာရှိလေးတွေကပဲ အနိုင်ယူသွားကြတာပါ ..."
"သြော် ... ခင်ဗျားက အခုပုံပြင်မှာတော့နိုင်ချင်တာပေါ့ လေ ... ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားမနိုင်ပေမယ့် လူတွေကခင်ဗျားကို သနားကြတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်"
"သနားတယ်ဟုတ်လား ... အလကားပါဗျာ..ကျွန်တော့်ကိုငတုံးကြီးခံရတာတောင် နည်းသေးတယ်ဆိုပြီး ရယ်ချင်နေကြတာပါ .. သူတို့တကယ်သဘောကျတာက ရွှေယုန်ကိုပါ .. တကယ်တော့ဗျာ .. လောကကြီးဟာ ...."
ကျွန်တော်ရွှေကျားကို ဘာမှဆက်မပြောချင်တော့သောကြောင့် ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ ရွှေကျားကတော့ လောကကြီးဟာ ... ဘယ်လိုဘယ်ဝါ ဆိုပြီး ဒဿနတစ်ခု ထုတ်နေပေလိမ့်မည် ။
ပိတ်ကားချသွားပြီဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော်ကားထိုင်ခုံတွင်ပင်ဆက်လက် ထိုင်နေသည် ။ ရုံအစောင့်ရောက်လာသည် ။
"ဟေ့လူ မပြန်သေးဘူးလား ... ပြဇာတ်ပြီးသွားပြီလေ"
"ဗျာ .. ဟုတ်လား ကျွန်တော်ကတော့ ပြီးသွားပြီလို့မထင်ပါဘူး ... ဒါဟာ ခဏတာပိတ်ကားချလိုက်တာမဟုတ်လား"
"မဟုတ်သေးဘူးလေဗျာ ... ခင်ဗျားဘာတွေကြောင်နေတာလဲ ... မင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းစည်းသွားလို့ ပရိတ်သတ်တွေတောင် လက်ခုပ်တီးလိုက်ကြသေးတယ်လေ"
"သြော်... ခင်ဗျားက အဲ့ဒါကို ဇာတ်သိမ်းလို့ဆိုလိုချင်တာလား .. ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လိုမယူဆဘူး .. ဒါဟာ တမင်သက်သက်လုပ်လိုက်တဲ့ ဇာတ်သိမ်းပဲဗျ ... တကယ့်ဇာတ်သိမ်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သေမှပဲရှိမယ်ထင်တယ်လေ .."
"ခင်ဗျားက အရူးပဲ .. ဒါဆိုလည်း အဲ့ဒီပိတ်ကားနောက်တစ်ခါ ပြန်ဖွင့်မယ့်အချိန်ခင်ဗျားဘာသာ ခင်ဗျားစောင့်ပေတော့ အပြင်မှာတော့နှင်းတွေကျနေပြီ ... ကျုပ်လည်း ပြန်တော့မယ်..."
"သြော်နှင်းတွေတောင် ကျနေပြီလား ... ဒါဆိုဆောင်းရောက်ပြီပေါ့ ... အေးဗျာ ကျွန်တော်တကယ့်ဇာတ်သိမ်းရောက်တဲ့အထိ ကြည့်ချင်လို့ ဆက်စောင့်လိုက်ဦးမယ် ... ဆောင်းဆိုတာ အိပ်မက်တွေ တကျော့ပြန်ရောက်တတ်တဲ့အချိန်ပဲဗျ ... မကြာခင်ပိတ်ကား ပြန်တက်လာပြီး ပြဇာတ်ကို ကျွန်တော်ကြည့်ရဦးမယ်ထင်တယ် ... ခင်ဗျား ပြန်ရင်လည်းပြန်တော့လေ ကျွန်တော်ကတော့စောင့်လိုက်ဦးမယ် ..."
ကျွန်တော့်ကိုကြည့်၍ ခေါင်းခါကာ ရုံအစောင့်သည်ထွက်ခွာသွားသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဇာတ်လမ်းများပြီးဆုံးသည်ဟု ဘယ်တော့မှမထင် ... ပိတ်ကားပြန်ပွင့်မည့်အချိန်ကို စောင့်ရဦးမည် ။ နှင်းတွေကျနေပြီဟု ဆိုသည်။ ဆောင်းရာသီကို ရောက်ပြီပေါ့ ...။
ဆောင်းဆိုတာ အိပ်မက်တွေတစ်ကျော့ပြန်လာ တတ်တဲ့ရာသီမဟုတ်လား ............။
Photo credits; flickr.com, wordpress.com, excavators101.com, lawnjock.com, saskschools.com, madehow.com
ရေးသားသူ....... မောင်ဖားကြီ6းယောက် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်
အကြောင်းအရာတူ...... ရသတို ပြခန်း
Sorry, Blame it on me ( 100 th post )
ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်ကို စရေးခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ ...။ ဘယ်လောက်ကျော်ခဲ့လဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော့်ထုံးစံအတိုင်းမမှတ်မိတော့ဘူး ။ ဘယ်ရက်က ဘလော့ဂ်ကိုစဖန်တီးလဲဆိုတာနဲ့ ပို့စ်စရေးတဲ့နေ့ ပို့စ်တင်ဖြစ်တဲ့နေ့တွေက လွဲနေပြီး ဘယ်ရက်ကို အတည်ယူရမလဲ ဆိုတာ မသိတာလည်းပါတော့ တစ်နှစ်ပြည့်တွေဘာတွေလည်း အထူးတလည်မရေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ဘလော့ဂ်ဂါတွေ တစ်နှစ်ပြည့်တို့ ပို့စ်တစ်ရာမြောက်တို့ ရေးတာဖတ်ရရင်တော့ ကျွန်တော်အရမ်းအားကျခဲ့ပါတယ် ။ တစ်နှစ်ပြည့်မရေးနိုင်ရင်တောင် ၁၀၀ ပြည့် ပို့စ်တော့ အမှတ်တရအဖြစ်ရေးမယ်လို့လည်း အားခဲထားခဲ့တယ် ။ အရင်ရေးတဲ့နှုန်းနဲ့တုန်းကတော့ ငါလည်း တစ်ရာမကြာခင်ပြည့်တော့မှာဆိုပြီး ဘယ်လိုရေးမယ် ဘာတွေရေးမယ် ဆိုပြီးတွေးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့ ၁၀၀ပြည့်အောင်ရေးဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော့်အတွက် ထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူး။
၂၀၀၉ တစ်နှစ်လုံးမှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာက ၁၀ ပုဒ်ကျော်ကျော်ရယ်ပဲရှိတယ်။ ဒါနဲ့ dashboard က ပို့စ်အပုဒ်ရေဖေါ်ပြထားတာကို သတိထားမိတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ကဗျာက ၉၉ ပုဒ်မြောက်ဖြစ်နေတယ် ...။ ဒီတော့ နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ အခုလက်ရှိပို့စ်ဟာ တစ်ရာမြောက်ပေါ့...။
တစ်ရာမြောက်ကို ကျွန်တော်ဘာရေးရင်ကောင်းမလဲ။ တွေးထားတာတွေအကုန်လုံး ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်တယ်။ ဒီကြားထဲ အိမ်ကကွန်ပြူတာကလည်း သုံးမရအောင်ပျက်... အင်တာနက်ဆိုင်လာဖို့ကလည်း ခရီးတွေကထွက်နေရတာနဲ့ အလှမ်းဝေး ... မအားတဲ့ကြားက အချိန်လုပြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရေးနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်း ဘလော့ဂ်ဂါတွေကိုပဲအားကျစိတ်ဖြစ်နေမိတယ်။ ဒီအတိုင်းတော့မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီး တစ်ရာမြောက်ပို့စ်ကို တစ်ခုခုတော့ အမှတ်တရဖြစ်အောင် ရေးမှပါလို့တော့ စိတ်ကအမြဲဖြစ်နေတယ်။
တစ်နေ့က ရုံးကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားတော့ ကားပေါ်ကတီဗီမှာ MTV တစ်ခွေကြည့်ခဲ့ရတယ်။ Akon ရဲ့ ခွေပါ ။ သီချင်းတွေကလည်း ကြာပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် AKon ကို ကျွန်တော်အသံအနေနဲ့သာ ဟိုးတုန်းကနားထောင်ဖူးပြီး video ကိုတော့ သေသေချာချာမကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ အဲ့ဒီအထဲက သီချင်းကိုလည်း အရင်တုန်းကသိခဲ့ပေမယ့် နားထဲသေချာမရောက်ခဲ့ဘူး။ အခု music video အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရမှ ကျွန်တော့်လက်ရှိအဖြစ်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေသလိုဖြစ်ပြီး ရင်ဘတ်ထဲကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲကြာနေပါစေ ရင်ဘတ်ကိုတွယ်ညိနေသ၍ လတ်ဆတ်နေဆဲပါပဲဗျာ ။
အဲ့ဒီသီချင်းမှာ Akon ကပြောပါတယ်။ အပြစ်အားလုံးဟာ သူ့ကြောင့်ပါတဲ့ ..။ သူ့ကိုသာ အပြစ်တင်ပါတော့လို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာလေသံလို စိတ်မရှည်တဲ့ပုံနဲ့ အားလုံးငါ့အပြစ်ပဲ ထားပါတော့ဆိုတဲ့ လေသံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ..။ ဖြစ်ခဲ့တာအားလုံးအတွက် သူစိတ်မကောင်းပါဘူး ။ သူ့အပြစ်တွေကိုဝန်ခံပါတယ် ..။ ဆက်ပြီးတော့ ဒီလိုအပြစ်တွေဟာ သူ့မှာတာဝန်ရှိတဲ့လို့ခံယူထားတဲ့ အသံမျိုးပါ ။ ဒါက ကျွန်တော်ခံစားမိတဲ့ အပိုင်းကိုပြောတာပါ ။ သူ့လေသံက ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ဆိုတာရယ် နောက်မဖြစ်အောင်တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုတဲ့ အသံမျိုးလို့ခံစားမိတယ်။
ကျွန်တော်လူတွေကို ဘယ်လောက်များ စော်ကားမော်ကားပြုခဲ့ပြီးပြီလဲ..။ ကျွန်တော်မြင်ဖူးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရော ကျွန်တော်မမြင်ဖူးပေမယ့် ရှိနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်( ဘလော့ဂ် လောက ) က လူတွေအပေါ်မှာ ကျွန်တော်သိလျှက်နဲ့ဖြစ်စေ မသိလျှက်နဲ့ဖြစ်စေ သူတို့စိတ်ပျက်အောင် လုပ်ခဲ့ဖူးမှာပါ ။ အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေ ၊ ကျွန်တော်က ချစ်တဲ့သူတွေ ၊ ကျွန်တော့်အပေါ်မုန်းတဲ့သူတွေ ၊ ကျွန်တော်က မုန်းခဲ့သူတွေအားလုံး စိတ်ကသိကအောက်တော့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးမှာပါ ။ Akon လေသံနဲ့ပြောရရင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ .. အားလုံးကျွန်တော့်အပြစ်တွေပါ လို့ပဲပြောရမှာပါ ။ တကယ်ကို ၀န်ချတောင်းပန်လိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရရင် ဒီနေရာကနေပဲ ကျွန်တော့်အပြစ်တွေလို့သတ်မှတ်ပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ်မူ့ကို မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ ...။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံယူချက်ဟာ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းအတိုင်းကို ဖြစ်သွားပါတယ်။ အခုတလော အကြိုက်ဆုံးသီချင်းကို ပြောပါဆိုရင်လည်း ဒီသီချင်းပါပဲ ။ လူတွေကိုစိတ်ထဲက တောင်းပန်ရင်း စိတ်ရဲ့အေးချမ်းပေါ့ပါးမူ့ကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Akon ရဲ့ မှော်ဝင်နေတဲ့ ဂရုဏာသံကနေ တဆင့်ပေါ့ ..။ MTV ကိုကြည့်ပြီးသွားရင်လည်း နောက်တစ်ခေါက်လောက် ကြည့်သွားပါဦး ..။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ၀န်ချတောင်းပန်မူ့ကို Akon ကတဆင့်ပြောပြပါလိမ့်မယ် :-) ။
Akon - Sorry, Blame It On Me (Video Premiere)
Uploaded by Alisvideo - Explore more music videos.
Lyrics | Akon Lyrics | Sorry, Blame It On Me Lyrics
ဒီလိုဝန်ချတောင်းပန်မူ့ဟာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ၁၀၀ မြောက်အမှတ်တရပို့စ်ဖြစ်ပါစေတော့ ...။ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သတ်သမျှလူအားလုံး.. ကျွန်တော်နဲ့မပတ်သတ်သမျှလူအားလုံး ... မြေကမ္ဘာပေါ်ကရှိသမျှလူအားလုံး ကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာ ရှိကြပါစေခင်ဗျာ ....။
ကိုယ်မသိခဲ့ ..... ။
ကိုယ်.. မသိခဲ့ ....။
ရုပ်ဝတ္တုတစ်ခုရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များ ...
ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်မှ နားမလည်ခြင်းများ ...
တိမ်တွေလို ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်လည်း ....
နေ၀င်ချိန်တွေ အဲ့ဒီလောက်စောလိမ့်မယ်ဆိုတာ ..
ကိုယ်... မသိခဲ့ ...။
ကိုယ် ..... တကယ် ..... မ ..... သိ ..... ခဲ့ ..... ပါ .....။
( 14 . 8 . 09 , 00:55 A.M )
သုံးဆယ်ကျော်တနင်္ဂနွေများ အစိမ်းရောင်အပင်တွေ ပိုစို...